Xog: Maxaan ka ognahay jadwalka doorashooyinka dalka? | KEYDMEDIA ONLINE
Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble, ayaa qorsheeyay in doorashooyinka dalka la soo gabagabeeyo ka hor dhamaadka sanadkaan, sida ay muujinayan xogo hordhac ah oo ay heshay Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ku cad xog ay heshay Keydmedia Online, oo ku saabsan Jadwalka Doorashooyinka Dalka, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorsheeyay in shanta bilood ee soo aaddan la soo gabagabeeyo doorashooyinka waddanka.
Sida ay KON ogaatay, bilaha June iyo July waxaa loo qorsheeyay in la dhamestiro guddiga doorashooyinka dadban, oo hadaba ay ku dhawaaqday Xukuumaddu, halka sidoo kale, la dhageysan doono cabashooyin soo laabtay oo la xariira tirada ergooyinka iyo in kaliya Xarumaha Maamulllada loo daayo doorashada Baarlamaanka, oo hadda qorshuhu yahay in lagu qabto labo magaalo.
Bilaha August iyo September, waxaa la soo af-meeri doonaa doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya, halka dhamaadka September, October iyo billawga November la soo gabagabeyn doonto doorashada Aqalka Hoose ee BJFS.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa dhici doonta dhamaadka bisha November, ama billawga December ee sanadkaan, sida ku ku cad xogata jadwalka doorashooyinka ee soo gaartay Warbaahinta Keydmedia Onine.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Amniga iyo hoggaanka doorashooyinka lagu wareejiyay billaawgii bishii May ee la soo dhaafay, wuxuuna hirgaliyay heshiiskii lagu saxiixay hannaanka doorashada 27-kii May, isla markaana wuxuu ku dhawaaqay guddiga doorashada in kastoo wali ay cabasho ka jirto.
Haddii sidaan ay u dhacdo, doorashadu waxa ay ka dhignaan doontaa in Farmaajo uu muddo xileedkiisii ku darsaday muddo 10 bilood ah taas oo ka baday waqtigii raacay muddo xileedkii Madaxweynihii isaga ka horreeyay Xasan Sheekh.